2010 Aprilia Scarabeo 200 - အသုံးပြုခံ့ 2010 Scarabeo 200 ဆိုငျကယျသမားမဂ္ဂဇင်းမှာ | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, pictures, ratings, reviews and discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (35236)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (11006)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9544)
ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ relay ကိုအမျိုးအစားများအပေါ်မှတ်စုများ (သတိပေးခြင်း: မှိုင်းခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့စရာ ... (8981)
VP ပြိုင်ပွဲလောင်စာနောက်ဆုံးရသတင်းများ: VP UNLEADE မိတ်ဆက် ... (8603)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (8107)
Kawasaki ZXR 750 - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, သတင်း & Advi ... (7237)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7217)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (7132)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, Review, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6221)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5779)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5641)
KTM Duke 125/200 RaceDynamics PowerTRONIC afte ရ ... (5490)
နေအိမ် → Aprilia → 2010 Aprilia Scarabeo 200 - အသုံးပြုခံ့ 2010 Scarabeo 200 ဆိုငျကယျသမားမဂ္ဂဇင်းမှာ
2010 Aprilia Scarabeo 200 - အသုံးပြုခံ့ 2010 Scarabeo 200 ဆိုငျကယျသမားမဂ္ဂဇင်းမှာ
19 Jun 2015 | Author: dima | ဟာ Off comments အပေါ် 2010 Aprilia Scarabeo 200 - အသုံးပြုခံ့ 2010 Scarabeo 200 ဆိုငျကယျသမားမဂ္ဂဇင်းမှာ
During the 1980s and 1990s, Aprilia expanded its reach into the Grand Prix and rally racing arenas, and their efforts were met with success outside of the world of motocross. Their fame in the racing world increased demand for their products, and allowed them to offer enduro bikes, superbikes, and scooters. တွင် 2004, Piaggio became Aprilia’s parent company, making the far-reaching producer the world’s fourth largest motorcycle manufacturer.
တွင် 2010, with its 267th Victory, Aprilia surpassed fellow former post-war bicycle maker MV Agusta, to become the most winning cycle racing company in the world.
The Aprilia Scarabeo series isagreat choice for those who want iconic, European styling inafuel-efficient but sporty scooter that offers comfortable seating for two. The 100 and 200 models are well-suited for city driving, but experienced riders who are interested in taking longer trips may want to opt for the more powerful 500 ပုံစံ, whose larger engine and higher-capacity fuel tank makes it better suited for the task.
Aprilia High-spec Dorsoduro လွှတ်တင် – Aprilia Dorsoduro Bike Reviews…
2011 Aprilia SportCity 125 - အသုံးပြုခံ့ 2011 SportCity 125 ဆိုငျကယျသမားမဂ္ဂဇင်းမှာ
Aprilia Leonardo SR 500 ခံယူချက်
20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Review: Aprilia Dorsoduro 750 မျိုးစုံစရိုက်နဲ့စက်ဘီးဖြစ်ပါတယ်…
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Aprilia Scarabeo 50 vs 100 Review 1 ဆိုင်ကယ် Mopeds
တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် စက်ဘီး Kawasaki ER-6n Bajaj Discover Aprilia Mana 850 ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Ducati Diavel ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Ducati Desmosedici GP11 Ducati 60 သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် စမတ် eScooter Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Brammo Enertia ဆူဇူကီး AN 650 ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype ဟွန်ဒါ DN-01 ဆူဇူကီး Colleda CO စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic